Shirka wadatashiga ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah oo ka furmay Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShirka wadatashiga ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah oo ka furmay Garoowe
Shirka wadatashiga ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah oo ka furmay Garoowe
May 5, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Shirka ayaa ka furmay xarunta madaxtooyada Puntland. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Garoowe-(Puntland Mirror) Shirka wadatashiga ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Garoowe maanta oo Axad ah.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir guddoominaya, waxaana ka qeybgalaya raysulwasaare Xasan Cali Khayre, iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hir-shabeelle iyo Jubbaland.
Weli si cad looma sheegin ajandaha rasmiga ah ee shirka, balse waxyaabaha looga wadahadli doona ayaa la filayaa in ay kamidtahay xiriirka u dhaxeeya dhowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo aan fiicnayn tan iyo dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay.
Madaxweyne Farmaajo oo yimid Garoowe, shirkii oo furmi doona beri
Inta badan gobolada Soomaaliya oo laga soomay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dowlada federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa u magacaabay Maxamed Aadan Jimcaale agaasimaha cusub ee laanta socdaalka Soomaaliya. Aadan ayaa badali doona Janaraal Cabdulaahi Gaafow Maxamuud kaasoo bishii lasoo dhaafay loo [...]
Wasaaradda Amniga Soomaaliya oo soo saartay go’aamo cusub oo lagu sugayo ammaanka Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasaaradda Amniga Soomaaliya ayaa soo saartay go’aamo cusub oo lagu sugayo ammaanka caasimada Muqdisho, sida lagu sheegay bayaan. “Waxaa la mamnuucay dhammaan qof kasta oo ay ku jiraan masuuliyiinta dowladda in magaalada Muqdisho [...]
At least 5 killed in suicide bomb in Beledweyne town
Beledweyne-(Puntland Mirror) At least five people were killed after a suicide bomber blew himself up in a restaurant in Beledweyne town of Hiiraan region on Sunday, residents and medical sources said. Ahmed Abdi Deeqow, a resident [...]